မီးရှို့ခံရပြီးပြာကျသွားတဲ့ ပေါက်မြို့နယ်ရှိကင်မရွာလေးကို လှူဒါန်းပြီးကူညီနိုင်ဖို့အတွက် တိုက်တွန်းလိုက်တဲ့ အိစိကွေး – Maythadin
May Thadin | June 18, 2021 | Celebrity | No Comments
ချစ်လှစွာသောပရိတ်သတ်ကြီးရေ ကလေး သရုပ်ဆောင် ဘဝကနေ ယခုအချိန်ထိ ပရိတ်သတ်တွေရဲ့ ချစ်ခင် အားပေးမှုကို ပိုင်ဆိုင်ထား နိုင်ခဲ့တဲ့ အိစိကွေးတစ်ယောက်ကတော့ အောင်မြင်မှုတွေရယူဆဲဖြစ်ပါတယ်။
လက်ရှိအချိန်ကာလ တစ်ခုကြောင့် အနုပညာ လှုပ်ရှားမှုတွေကို ရပ်တန့်ထားပြီး ပရိတ်သတ်တွေနဲ့ အတူရပ်တည်ကာ မိမိတတ်စွမ်းသ၍ ကူညီလှူဒါန်းမှုတွေ ပြုလုပ်လျက်ရှိပါတယ်
စစ်ကောင်စီမှ အာဏာသိမ်းကာစကတည်းက ပြည်သူတွေနဲ့အတူ အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကို ဆန့်ကျင်ပြ တဲ့နေရာမှာလည်း တက်ကြွစွာပါဝင် လှုပ်ရှားခဲ့ပါတယ်။ စစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေအတွက်လည်း ကိုယ်တိုင်သွားရောက် လှူဒါန်းမှုတွေပြုလုပ်လျက်ရှိပါတယ်
စေတနာရှင်ပြည်သူ တစ်ချို့ လှူဒါန်းမှုတွေ ကိုလည်း စစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေ ဆီကို ကိုယ်တိုင်သွား ရောက်ပြီး တစ်ဆင့်လှူဒါန်းမှုတွေကို ပြုလုပ်ပေးလျက်ရှိပါတယ်။
ယနေ့မှာတော့ စစ်ကောင်စီရဲ့ မီးရှို့ဖျက်ဆီးခြင်းခံ ခဲ့ရတဲ့ ပေါက်မြို့နယ်က ကင်းမရွာလေးကို ကူညီလှူဒါန်းဖို့အတွက် သူကိုယ်တိုင် ဦးဆောင်ကာ လှူဒါန်းကြဖို့ တိုက်တွန်းလာခဲ့ပါတယ်။
“ မကွေးတိုင်း ပခုက္ကူခရိုင် ပေါက်မြို့နယ် ကင်းမရွာ မှာ မီးလောင်ခဲ့ပြီး ရွာထဲ ကျန်ရစ်ခဲ့တဲ့ သက်ကြီးရွယ်အိုတွေနဲ့ မသန်စွမ်းတဲ့ ပြည်သူတွေအကုန် မီးထဲမှာ သေဆုံးခဲ့ရပါတယ် အိမ်ခြေ ၂၅၀ ရှိပြီး လူဦးရေ ၁၀၀၀ ကျော်ရှိပါတယ်.
ကျွန်တော်တို့ ကူရအောင်ဗျာ ထုံးစံအတိုင်း တစ်ယောက်ကို ၁၀၀၀ ၂၀၀၀ကစ ပြီး လှူလို့ရပါတယ် လူတိုင်း အခက်အခဲဖြစ်နေတာ သိပေမယ့် ၁၀၀၀ ဆိုတဲ့အတိုင်းအတာက စုလိုက်ရင် အကျိုးရှိတဲ့ အလှူဖြစ်မှာပါ “ ဟူ၍ ရေးသားထားပြီး သူ့အနေနဲ့ ရွာလေးမို့လို့ဆိုပြီး မျက်နှာမလွှဲကြပါနဲ့ဗျာ ဆိုပြီးတောင်းဆို လာခဲ့ပါတယ်။
ငွေတွေကို K pay – 09965180220 မှ တစ်ဆင့် လှူဒါန်းနိုင်သလို Wave money – 09965180220 မှလည်း လှူဒါန်းနိုင်တဲ့အကြောင်း သူရဲ့ လူမှုစာမျက်နှာကနေ အလှူခံတိုက်တွန်း ထားပါတယ်။ဖတ်ရှူ့ပေးကြတဲ့ပရိတ်သတ်ကြီးအားလုံးလည်း သာယာပျော်ရွှင်တဲ့နေ့လေးတစ်နေ့ကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေလို့ ဆု
ခ်စ္လွစြာေသာပရိတ္သတ္ႀကီးေရ ကေလး သ႐ုပ္ေဆာင္ ဘဝကေန ယခုအခ်ိန္ထိ ပရိတ္သတ္ေတြရဲ႕ ခ်စ္ခင္ အားေပးမႈကို ပိုင္ဆိုင္ထား နိုင္ခဲ့တဲ့ အိစိေကြးတစ္ေယာက္ကေတာ့ ေအာင္ျမင္မႈေတြရယူဆဲျဖစ္ပါတယ္။
လက္ရွိအခ်ိန္ကာလ တစ္ခုေၾကာင့္ အႏုပညာ လႈပ္ရွားမႈေတြကို ရပ္တန့္ထားၿပီး ပရိတ္သတ္ေတြနဲ႕ အတူရပ္တည္ကာ မိမိတတ္စြမ္းသ၍ ကူညီလႉဒါန္းမႈေတြ ျပဳလုပ္လ်က္ရွိပါတယ္
စစ္ေကာင္စီမွ အာဏာသိမ္းကာစကတည္းက ျပည္သူေတြနဲ႕အတူ အာဏာသိမ္းစစ္ေကာင္စီကို ဆန့္က်င္ျပ တဲ့ေနရာမွာလည္း တက္ႂကြစြာပါဝင္ လႈပ္ရွားခဲ့ပါတယ္။ စစ္ေဘးေရွာင္ျပည္သူေတြအတြက္လည္း ကိုယ္တိုင္သြားေရာက္ လႉဒါန္းမႈေတြျပဳလုပ္လ်က္ရွိပါတယ္
ေစတနာရွင္ျပည္သူ တစ္ခ်ိဳ႕ လႉဒါန္းမႈေတြ ကိုလည္း စစ္ေဘးေရွာင္ျပည္သူေတြ ဆီကို ကိုယ္တိုင္သြား ေရာက္ၿပီး တစ္ဆင့္လႉဒါန္းမႈေတြကို ျပဳလုပ္ေပးလ်က္ရွိပါတယ္။
ယေန႕မွာေတာ့ စစ္ေကာင္စီရဲ႕ မီးရွို႔ဖ်က္ဆီးျခင္းခံ ခဲ့ရတဲ့ ေပါက္ၿမိဳ႕နယ္က ကင္းမ႐ြာေလးကို ကူညီလႉဒါန္းဖို႔အတြက္ သူကိုယ္တိုင္ ဦးေဆာင္ကာ လႉဒါန္းၾကဖို႔ တိုက္တြန္းလာခဲ့ပါတယ္။
“ မေကြးတိုင္း ပခုကၠဴခရိုင္ ေပါက္ၿမိဳ႕နယ္ ကင္းမ႐ြာ မွာ မီးေလာင္ခဲ့ၿပီး ႐ြာထဲ က်န္ရစ္ခဲ့တဲ့ သက္ႀကီး႐ြယ္အိုေတြနဲ႕ မသန္စြမ္းတဲ့ ျပည္သူေတြအကုန္ မီးထဲမွာ ေသဆုံးခဲ့ရပါတယ္ အိမ္ေျခ ၂၅၀ ရွိၿပီး လူဦးေရ ၁၀၀၀ ေက်ာ္ရွိပါတယ္.
ကြၽန္ေတာ္တို႔ ကူရေအာင္ဗ်ာ ထုံးစံအတိုင္း တစ္ေယာက္ကို ၁၀၀၀ ၂၀၀၀ကစ ၿပီး လႉလို႔ရပါတယ္ လူတိုင္း အခက္အခဲျဖစ္ေနတာ သိေပမယ့္ ၁၀၀၀ ဆိုတဲ့အတိုင္းအတာက စုလိုက္ရင္ အက်ိဳးရွိတဲ့ အလႉျဖစ္မွာပါ “ ဟူ၍ ေရးသားထားၿပီး သူ႕အေနနဲ႕ ႐ြာေလးမို႔လို႔ဆိုၿပီး မ်က္ႏွာမလႊဲၾကပါနဲ႕ဗ်ာ ဆိုၿပီးေတာင္းဆို လာခဲ့ပါတယ္။
ေငြေတြကို K pay – 09965180220 မွ တစ္ဆင့္ လႉဒါန္းနိုင္သလို Wave money – 09965180220 မွလည္း လႉဒါန္းနိုင္တဲ့အေၾကာင္း သူရဲ႕ လူမႈစာမ်က္ႏွာကေန အလႉခံတိုက္တြန္း ထားပါတယ္။ဖတ္ရႉ႕ေပးၾကတဲ့ပရိတ္သတ္ႀကီးအားလုံးလည္း သာယာေပ်ာ္႐ႊင္တဲ့ေန႕ေလးတစ္ေန႕ကို ပိုင္ဆိုင္နိုင္ပါေစလို႔ ဆု
ဒါရိုက်တာ ကိုပေါက်ရဲ့လက်စွမ်းကို သဘောကျ ချီးကျူးလိုက်တဲ့ သည်ခေတ်နေ